विद्यार्थी भिसामा देश छाड्नेहारुको लहर ! - ज्ञानविज्ञान
नेपालमा विश्वविद्यालय, कलेज तथा विद्यालय खोल्ने होडबाजी नै चलिरहेको छ।नेपालमा विश्वविद्यालय मात्र नौवटा छन् । प्राविधिक शिक्षा दिने शिक्षालय तथा कलेजहरूको संख्या सयौं छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कोर्स सञ्चालन गरिरहेका कलेज पनि लगभग ९५ वटा छन् । विडम्बना, यति धेरै शिक्षालय हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थी भिसामा देश छाड्ने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । विदेश पढ्न जाने रहर मात्र नभै लहर नै चलिरहेको छ ।
नेपाली विद्यार्थी नामै नसुनेका वा युद्धग्रस्त देशमा पनि गएको पाइन्छ । छिमेकी भारत, चीन तथा श्रीलंकाबाहेक बेलारुस, गुयाना, साउदी अरेबिया, स्लोभाकिया, स्विट्जरल्यान्ड, पोल्यान्ड, भियतनाम, अर्मेनिया, रोमानिया, हल्यान्ड आदि देशका लागि पनि विद्यार्थीहरूले नो अब्जेक्सन लेटर लिँदै आएका छन् |
Don't Miss it स्वस्थ्य रहनकालागि रामदेव आफैँचाहिँ के खान्छन् त ?
Up Next केहि यस्ता विधीहरु, जसले घाँटीको दुखाईमा प्रभावकारी उपचारको काम गर्छ